Madaafiic dad rayid ah ay wax ku noqdeen oo lagu garaacay Bakaaraha | raascasayrmedia.com
← DKMG oo sheegtay inay isku soo dhiibeen Ciidamo ka tirsan Shabaab
Safarki Waftigi Qurba joogta Gobolka Raascasayr iyo Laasasurad (Sawiro ) →
March 23, 2011 · 5:37 pm
Madaafiic dad rayid ah ay wax ku noqdeen oo lagu garaacay Bakaaraha
Duqeymo oo dad rayid ah ay wax ku noqdeen ayaa maanta waxa ay ku dhacday gudaha Suuq wayn Bakaaraha ee magalada Muqdisho xili uu san socon wax dagaal ah.
5-qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay ku dhawaad 30-kalena way ku dhaawacmeen Duqeyn maanta Ciidamada AMISOM ay ku garaaceen gudaha Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo la sheegay in dhamaantooda ay ku sugnaayeen Boosteejada gaadiidka laga raaco ee aada magaalada Baydhabo ayaa waxaa la tilmaamay in Madaafiic ka dhacaysay Xarumaha Ciidamada AMISOM ay ku hoobatay xili wax dagaal ah uusan ka socon magaalada Muqdisho.
Saraakiisha gadiidka gurmedka deg dega ee AMBALASTA oo la hadlay Idaacadda Shabelle ayaa waxaa ay xaqiijiyeen inay qaadeen dhaawaca 21-qof oo rayid ah islamarkaana ay arkeen dhimashada 5-qof oo iyana rayid ah oo ku sugnaa goobta madaafiicda ay ku dhacday.
Majiraan wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha AMISOM oo ku aadan duqeymaha Maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho hase ahaatee duqeyntaan ayaa imaanaysa xili maalin ka hor Ciidamada AMISOM sidaan oo kale Madafiic ay ula dhaceen xaafado ku yaala Muqdisho kuwaasi oo qasaaro uu kasoo gaaray dad rayid ah.